Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Nkà n'okporo ámá bụ ụdị okwu nka ọgbara ọhụrụ na-eme ka obodo anyị maa mma. A ọma n'okporo ámá mural nwekwara ike-akpali gị na-eche banyere a mmadụ mkpa isiokwu ma ọ bụ na-echetara gị nke ọrụ oge gboo nwe. Obodo nke Europe juputara na…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Europe dị ka kọntinent dị iche iche, Europe na-eweta ihe ọ bụla ụdị njem - atọ ụtọ ata aru gụnyere. Ma ebe ga gị uto buds ike ụtọ kasị? Foto nri ga -eme ka Instagram gị nwee ihe ruru 100? Kwụsị na-eche ma na-amalite munching….
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji egwú dragons, unicorns, na-efe efe ezì. Ee, ezi! Agba The Year nke Ezi, Agba Chinese New Year na Europe! Chinese New Year, makwaara dị ka Spring Festival ma ọ bụ ememme Afọ Ọhụrụ, bụ ihe kasị mkpa mere ná Chinese kalenda. Ọ bụ ihe pụrụ iche…